ကျီးမနိုးည(သူခိုးကြီးည) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျီးမနိုးည(သူခိုးကြီးည)
Posted by waigyee on Jul 5, 2011 in Creative Writing |3comments
အရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်က သူငယ်ချင်းတစ်စု နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းစောင့်မျှော်နေသည့်ရက်မှာ
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့ညပင်ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘာမှအရည်လည်းမရ၊
အဖတ်လည်းမရ နှစ်စဉ်ပုံမှန်ကစားကြခြင်းဖြစ်သည်။ သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က တစ်အုပ်စုလုံး(၁၀)တန်းအောင်ပြီးကာစဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဝေးလားဝါးလားပဲပေါ့။
လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့ရောက်တာနဲ့ ဘာမှလည်းမဟုတ်၊ နေ့ခင်းကတည်းက ပလန်တွေဆွဲကြ သည်။ ပိုက်ဆံတွေလိုက်ကောက်သည်။ မင်းကဘယ်လောက်ထည့် မင်းကဒီလောက်ထည့် စသဖြင့်ပေါ့။ ဟီး . . ဒါကရှက်ကီဝယ်မယ်။ ဒါက . . . ကြက်ဝယ်မယ်၊ မြည်းဖို့ကသက်သက်ဝယ်၊ ဘာမှလည်းမဟုတ် ညနေခင်းလောက်ကတည်းက အကုန်လုံးနီးပါးဝယ်ပြီးနေပြီ။ ညနေခင်းကျ တော့ ကြက်သားသွားဝယ်ထားတဲ့သူက သွားဝယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ဘော်ဒါအိမ်တစ်အိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေ အကုန်လုံးကို စုပြီးထားလိုက်တယ်။ ထားပြီးတာနဲ့ ကဲ . . .ရေပြန်ချိုးကြမယ်ပေါ့။ ချိုးပြီးတာနဲ့ ဘယ်နှနာရီ၊ ဘယ်ဆိုင်မှာဆုံမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲက ဘုံဆိုင်မှာဆုံကြတယ်ပေါ့။ ဟီး . .နည်းနည်းလေးအစပျိုးလိုက်တာပေါ့။ ပျိုးပြီး ညရောက်တာနဲ့ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အိမ်မှာ လူပြန်စု ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ကြက်သားတွေကိုင်၊ အတုံးတွေတုံး၊ ဘူးသီးတွေနွှာ၊ စချက်ကြပါ တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညအစောပိုင်းက ပျိုးထားတာလေး လစ်မစ်လည်းကျရော၊ ပုလင်းကိုစထောင် တော့တာပါပဲ။ သောက်ပြီးစောင့်ကြတာပေါ့။ ဟင်းအိုးလည်းကျခါနီးလည်းကျရော၊ ဘော်ဒါတစ်ဗွေက ခါတိုင်းသူတို့ထည့်နေကျ၊ ရှူးတိုးတိုး . . . .ဟိုအရွက်ဟိုအရွက်တဲ့ . .
ကျွန်တော်ဒတ်လိုက်ပြီ။ ဟေ့ကောင် . . .ထည့်မနေပါနဲ့တော့ကွာ။ ဒီအတိုင်းလည်းကောင်းတာပဲ။
တော်ပြီ။ လိမ်ကုန်မယ်. . လို့ပြောလည်းမရဘူး။ ငါ့ဘော်ဒါတစ်ဗွေဆီမှာ အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး သွားယူတော့တာပါပဲ။ ဒီကောင်လည်း ကွဲကြောင်ကွဲကြောင်နဲ့ပေါ့။ သွားတာကောင်းကောင်း မသွားဘူး။ ငတ်တီးကျသွားသေးတယ်။ နူးကာနီး ကြက်သားတစ်တုံးပါ ဆယ်ပြီးကိုင်သွားတယ်။
နောက်မကြာဘူး။ ချွေးသီးချွေးပေါက်ကျပြီးပြန်လာတယ်။ ဟေ့ကောင်. . ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့။ မဟုတ်ဘူးတဲ့ . .(ဒီကောင်သွားတဲ့ အိမ်က ကျွန်တော်တို့အခုဝိုင်းဖွဲ့ နေတဲ့ အိမ်နဲ့ဆို နှစ်လမ်းကျော်ရတယ်) ငါ(၃)လမ်းလမ်းဖြတ်နားလည်းရောက်ရော၊ ငါ့ကိုအဲဒီ လမ်းဖြတ်နားကခြံထဲကနေ ပိန္နဲပင်ကနေ “ချွတ်ချွတ်”ဆိုပြီး အသံကြားတော့ လှည့်ကြည့်လိုက်တာ ခြံထဲကနေ လက်ပုံစံမည်းမည်းကြီးထွက်ပြီး ပိန္နဲရွက်ကိုလက်နဲ့တောက်လိုက်၊ လက်ဝါးဖြန့်လိုက်လုပ်ပြတာတဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဒီကောင့်ကို ဟေ့ကောင် ဟုတ်လုိ့လားကွာ . .မင်းကွဲကြောင်ကွဲကြောင်ဖြစ်နေလို့များလားဆိုတော့ ၊ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ငါလည်း ကြက်သားတုံးလေး ကို ပူလို့ဆိုပြီး လက်ထဲကနေကိုင်ပြီး သုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နဲ့သွားတာပဲတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ထဲကတစ်ယောက် (အရင်ကတော့ အဲဒီ(၃)လမ်းဖြတ်က အိမ်က သူများတွေပြောသံကြားတော့ ဗိုက်ကြီးသည်တစ် ယောက်သေဖူးတယ်။ ) အဲဒါ သူနေမှာပေါ့တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ ဆိုပြီး . . .ကဲ ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ . . .ငါတို့နောက်မှ စားပြီးသောက်ပြီးမှ အဲဒီဘက်ကို ဆော့ရင်းသွားကြည့်ကြမယ်ပေါ့။ ကဲ ကျက်ပြီကျက်ပြီ ..ဆွဲကြမယ်ဆိုပြီး သောက်လိုက်စားလိုက်နဲ့ ခဏတဖြုတ်နားကြရော၊ ကွဲတဲ့သူလည်းကွဲနေပြီ။
၀ီခေါ်တဲ့သူလည်း ၀ီခေါ်နေပြီ၊ ဆန်ပြုတ်ရောင်းတဲ့သူလည်း ရောင်းနေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ သိပ်မကွဲ သေးတဲ့ (၄) ယောက်က တော့ ခုနအကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားပြီး ဟေ့ရောင်ငါတို့အဲဒီလမ်းဖြတ်ကိုသွားမလားဆိုပြီး ပြောတော့ . . .လူများရင်တော့ ဘာမှထူးမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ဆေးလိပ်လေးဖွာပြီး ချီတက်သွားကြတော့ ဘာမှအရိပ်အယောင် တောင်မပြဘူး။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း ဆက်ပြီး တောင်ရွှေ့မြောက်ရွှေ့ပေါ့။ နောက်(၅)လမ်းထဲကိုလည်းရောက်ရော၊ အဲဒီလမ်းထဲမှာ ဒိုင်နာက(လိုင်းကား) လိုင်းနံပါတ်ကတော့ ( . . .)ပါ။ အဲဒီကားပေါ်မှာ ခြင်ထောင်ထောင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကားကိုဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်း အနားရောက်လာတယ်။ ကားဘီးပဲလေလျှော့ရမလားပေါ့။ ကျွန်တော်တို့(၄)ယောက်က တစ်ယောက်တစ်ကွဲစီ ကားကိုတစ်ဖက်စီ လေလျှော့ကြတာပေါ့။ လေလျှော့တာကလည်း တစ်ပြိုင်တည်း မလျှော့ရဲဘူးလေ။ အလှည့်ကျ အချက်ပြပြီး ရှူး ရှူးနဲ့လျှော့ရတာ၊ တော်ကြာ ကားဘီးလေးဘက်စလုံး တစ်ပြိုင်တည်းလျှော့ရင် အသံကျယ်မှာစိုးလို့လေ။ ဒီလိုနဲ့လျှော့ရင်းလျှော့ရင်း ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က ရုတ်တရက်ထပြေးပါလေရော။ အသံတော့မထွက်ဘူး။ ဘာမြင်သွားလို့လဲမသိဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကားပေါ်ကိုကြည့်တော့လည်း ဘာမှမမြင်ရဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ဒီကောင့်နောက်ပြေးလိုက်ပြီး မေးတော့မှ
အီး . . .. ကျွန်တော်တို့တွေ အောက်ငုံ့ပြီး ကားဘီးလေလျှော့နေတုန်း သူကအပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့ သူ့ကကားညာဘက်နောက်ဘီးကို လေလျှော့ရတာဆိုတော့ ၊ သူ့ဘက်အနောက်ခြမ်းက ခြင်ထောင်ဘေးကနေ ဆံပင်ရှည်နဲ့တဲ့ခေါင်းပဲပါတယ်တဲ့၊ သူ့ကိုပြူးပြီး ကြည့်တယ်တဲ့ဗျာ။ သရဲမတဲ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လည်း မင်းကဟုတ်လို့လားဟ ဆိုတော့။
အာ . . .အသေအချာကိုပဲတဲ့။ ငါကထင်တာ ကားသမားတွေများ ဟိုဟာခေါ်ထားတာလား ဆိုပြီးအသေအချာကြည့်တာပဲတဲ့ ..မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။ သူကြည့်တဲ့ပုံက ကြက်သီးထစရာကြီးတဲ့။ သူနောက်မှ ပြန်လုပ်ပြတာ . . .သူလုပ်ပြတာတောင် ကျောချမ်းစရာကြီးဗျ။
ဒါနဲ့သွားပြန်ကြည့်တော့ ဘာမှမမြင်ရတော့ပါဘူး။ နောက်နေ့(၃)(၄)ရက်ကျတော့ အဲဒီကား မောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာကိုပြောပြတော့မှ ဟုတ်တယ်တဲ့။ သူတို့လည်း သူခိုးကြီးည ပြီး နောက်ရက်က ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတဲ့။ တစ်ရက်ကျော်လည်းကျရော၊ အဲဒီသရဲမက ကားသိမ်းချိန်ရောက် ရင်ပါပါလာတာတဲ့ဗျာ။ ပထမသူတို့လည်း မသိဘူးတဲ့။ အဲဒီနေ့ကမှ စပါယ်ယာလုပ်တဲ့သူက ကားခေါင်းရှေ့ကိုပြောင်းစီးပြီး သူက လူပြတ်တဲ့နေရာနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အနောက်ကိုခန်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့မှ ကားအရှေ့ထောင့်စွန်း သူနဲ့ဆိုတည့်တည့်ကျမှာပေါ့
အဲဒီမှာ မိန်းမပုံစံပါလာတာတဲ့ဗျာ။ အဲဒါနဲ့ပြန်ရောက်ပြီး ကားကအုံနာအိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်မှာပဲထိုးတာ ဆိုတော့ ဒရိုင်ဘာက ဘုရားစာတွေ၊ ဘာတွေရွတ်ပြီး စောင့်ကြည့်ရင်း စပါယ်ယာနဲ့အတူတူအိပ်ကြတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာစောင့်ကြည့်ရင်းကနေ ဒရိုင်ဘာက အိပ်ပျော်သွားမှ
စပါယ်ယာတစ်ယောက်တည်းကြုံရတာတဲ့ဗျာ။ ခြင်ထောင်ပေါ်ကနေ မိုးပြီးကြည့်နေတာတဲ့ဗျာ။
ခေါင်းပဲမြင်ရတယ်ပြောတယ်ဗျ။ သူလည်းအိပ်ပျော်သလို နိုးသလိုဖြစ်နေတာတဲ့။ ဒါပေမယ့် အသိစိတ်ကတော့ လုံးဝမအိပ်ပျော်ဘူးတဲ့ဗျာ။ တော်တော်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးတဲ့။ အတင်းအားတင်းပြီးတော့ လှုပ်လို့လည်းရရော မရှိတော့ဘူးတဲ့ဗျာ။
နောက်တစ်ယောက်ထပ်တွေ့တာကလည်း ကားရပ်ထားတဲ့ ကားအုံနာအိမ်ရှေ့ရဲ့ အရှေ့ကအိမ်က အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်လည်းမြင်တယ်ပြောတယ်။ သူကတော့ မနက်(၃း၃၀)လောက် သူတို့ကား မထွက်ခင် တစ်ရေးနိုးတော့ အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ ကားပေါ်က ခြင်ထောင်ထောင်ထားတဲ့ တစ်ဖက်အခြမ်းကနေရပ်နေတာတဲ့. . .ခေါင်းပဲမြင်ရတယ်တဲ့ . .အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါတဲ့ဗျာ။
နောက်နေ့တွေလည်းကျရော ကားအုံနာကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး ကားကို ပရိတ်တွေ၊ ဘာတွေရွတ်လိုက်တော့မှ ငြိမ်သွားတာတဲ့ဗျာ။
သူခိုးကြီးညကနေ သူရဲကြီးည ဖြစ်သွားတယ် ထင်ပ
မိုင်တိုင် ၇၆ က တကိုယ်လုံးပါတယ်။
ဒိုင်နာ ၇၆ က ကိုယ်မပါဘူး ခေါင်းကြီးပဲပေါ့။